Voita mabhindauko anobatsira vakadzi | Kwayedza
10 May, 2021 - 16:05 2021-05-10T16:41:28+00:00 2021-05-10T16:28:44+00:00 0 Views
SANGANO reVaChirenda Centre of Hope Foundation – rakabatana nemudzimai waMambo Seke, Mai Naume Chimanikire – riri kusimudzira raramo yemadzimai nevanasikana mudunhu rekwaSeke kuburikidza nekuvadzidzisa mabasa emaoko zvichitevera kudzorerwa kumashure kwakaita upenyu hwavo nekunyuka kwechirwere cheCovid-19.
Mabhindauko ari kubatsirwa nawo madzimai nevanasikana ava anosanganisira kuvadzidzisa kubika, kugadzira mishonga yemuzvimbuzi, kugadzira zvuma uye mabhasikiti vachitengesa.
Muhurukuro, Mai Chimanikire vanoti nekuda kwechirwere cheCovid-19, madzimai mazhinji upenyu hwavo hwakanganiswa sezvo vamwe vari kusangana nemhirizhonga mudzimba uye vasikana vasati vabva zera vachitizira kuvarume nekuda kwenhamo.
Vanoti nekuda kwemamiriro ezvinhu aya, donzvo ravo nderekuti vanhukadzi vakwanise kuzvishandira vachiita mabhindauko akasiyana.
“Tine madzimai akawanda vakagara vasina zvavari kuita, koita vamwe vakafirwa nevarume nevakatorambwa. Saka upenyu huri kuvaomera nekudaro vanototambudzika kuchengeta mhuri dzavo.
“Chinangwa chedu takabatana neChirenda Centre of Hope Foundation kuti tivadzidzise vazvishandire nemaoko avo kuita mabasa uye vagozvichengeta pamwe nemhuri dzavo,” vanodaro.
Mai Chimanikire vanoenderera mberi vachiti, “Covid-19 yakavhiringidza zvakawanda. Mune dzimwe dzimba hamuna rugare, mhirizhonga yakawandisa. Saka tinoda kusimudzira madzimai vari kusangana nemhirizhonga iyi vagogona kuzvimirira, vazvishandire vachizive kuti kutizwa nemurume kana kufirwa hazvireve kupererwa neupenyu. Iye munhu oga anotogona kuzvishandira akatozviraramisa nevana.”
Vanoti vari kutsigira vanasikana zvakare nedonzvo rekuti vakwanise kuita mabhindauko anovapa raramo.
“Koti kuvanasikana vedu, tinoda kuti vazive kuti mahwindi avanoswera vachifambidzana nawo hapana chavainacho uye chavanovapa muupenyu hwavo. Kungovatambisa chete.
“Saka tinoda kuti vadzidze kuzvishanidra uye kuzvimiririra. Tine vamwe vanasikana vanotouya vachichema kuti vanoda kudzokera kuchikoro vachiti vakatambisa mukana. Saka uyu ndiwo mukana wavo wekuti vadzidze kuzvishandira,” vanodaro Mai Chimanikire.
Svondo rinouya pachaitwa chirongwa chemazuva mana chichapindwa nevanhukadzi vemudunhu iri apo vanenge vachifundiswa pamusoro pemabhindauko anogona kuvapa pundutso muupenyu.
“Muno maSeke tine mawadhi 21 saka tichaisa madzimai nevanasikana vemumawadhi akasiyana mumapoka maviri. Vamwe vachaita mazuva maviri kutanga Muvhuro vachipedza Chipiri kozoti vamwe vozoitawo kubva Chitatu vachipedza neChina.
“Sekuziva kwemunhu wose, tichiri panguva yekurwisa denda reCovid-19 saka hatidi kuti vanhu vaungane vakawanda, hazvitenderwe izvozvo,” vanodaro Mai Chimanikire.